Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Ganacsiga » Safarka meheraddu wuxuu u arkaa faa iido kadib COVID-US
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Shaqaaluhu waa kuwo wax soo saar leh oo aan walwal badan qabin marka ay u safrayaan ganacsiga. Kaliya rubuc (25%) ayaa sheegay inay dareemaan culeys badan marka ay shaqeynayaan inta lagu guda jiro safar shaqo, iyadoo 32% ay sheegeen inaysan dareemin wax ka duwan halka 43% soo hartay ay dareemaan walaac yar marka ay shaqeeyaan marka ay safrayaan.
In ka badan saddex meelood meel shaqaalaha Maraykanka ayaa sheegaya in fikradaha ganacsi ee ugu fiican ay dhacaan marka ay u safrayaan meheradda.
Kaliya 26% shaqaalaha Mareykanka ayaa u maleynaya in shirar fool ka fool ah ay dhinteen.
74% shaqaalaha Mareykanka waxay u malaynayaan safarka ganacsiga iyo shirarka shaqsiyeed loo baahan yahay mustaqbalka ganacsiga.
In ka badan kala bar (53%) shaqaalaha Mareykanka ayaa u malaynaya in warshadaha ay u baahan yihiin shirar shaqsiyeed si ay u noolaadaan, daraasad cusub ayaa la helay.
Sahanka 1,000 shaqaale Mareykan ah ayaa baaray dabeecadaha ku wajahan shirarka shaqada iyo safarka ganacsiga. Waxay shaaca ka qaadday in kaliya 26% shaqaalaha ay u maleynayaan in shirar fool-ka-fool ah ay dhinteen, iyadoo 74% soo hartay oo rumeysan shirarka shaqsiyeed ay fure u yihiin mustaqbalka ganacsiga.
In ka badan kala bar (53%) ayaa leh way fududahay in lagu aamino iibinta qof ahaan intarneedka, iyada oo 64% kale ay leeyihiin furaha lagu aamini karo waa xiriirka aadanaha. Sidoo kale kordhinta kalsoonida marka la kulmo qof ahaan, sahanku wuxuu iftiimiyay sida u safridda shirarka shaqsiyeed ay ka wax-tar badan tahay-60% US shaqaaluhu waxay sheegeen inay u diyaar garoobaan shirar shaqsiyeed ka badan inta ay u qabtaan shirarka dalwaddu.
Sahanku wuxuu eegay dabeecadaha guud ee safarka ganacsiga, iyagoo ogaaday in shaqaalaha badankoodu ay aad u xiiseynayaan inay ku laabtaan safarada shaqada. 41% waxay sheegeen inay u arkaan safarka ganacsiga mid ka sii badan tan iyo masiibada, iyadoo 40% ay sheegeen in safarada ganacsiga ay muhiim u noqon doonto marka ay shaqo cusub raadinayaan. Waxay iftiimisay sida jiilalka da 'yarta ay ugu hamuun qabaan safarka ganacsiga, iyada oo in ka badan kala bar (54%) oo ah 16-24-sano jir ay sheegeen in safarka ganacsigu uu ka sii badan yahay tan iyo masiibada, marka la barbar dhigo kaliya 13% in ka badan 55s. Sidoo kale iyagoo doonaya waayo-aragnimo shaqsiyeed oo dheeraad ah, jiilalka yaryar waxay helayaan safar aad u dhiirran. In ka badan kala bar (53%) ee Gen Z ayaa sheegaya in fikradaha ganacsi ee ugu fiican ay dhacaan marka la safrayo, marka la barbar dhigo wax ka yar shan meelood (18%) in ka badan 55 -meeyadii.
Daraasadda ayaa sidoo kale eegtay caadooyinka kharash -garaynta, oo tilmaamaysa waxa ay dadku dareemaan inay raaxo ku bixinayaan markay shaqo u safrayaan. Waxay ogaatay in dadku ay aad ugu raaxaystaan ​​bixinta cuntada, iyada oo 83% ay sheegeen inay dib u dalban doonaan cunno maqaayad. Tani waxay hoos u dhacdaa marka la fiirinayo adeegga qolka, iyada oo kaliya 57% ay dareemaan raaxo inay ku fidiyaan wax ay ku amreen qolkooda. In ka badan rubuc ka mid ah shaqaalaha (26%) ayaa dareemi doona inay si raaxo leh u bixiyaan khamriga, ragga ayaa ka raaxo badan dumarka (16%vs 8%) iyo Gen Z iyo millennials ka raaxo badan 55s (36%vs 9%).
Cuntadu waxay ku jirtaa liiska ugu sarreeya marka la fiirinayo mudnaanta shaqaalaha marka la safrayo. 72% waxay rabaan inay casho u baxaan inta lagu guda jiro safar shaqo, iyadoo 69% ay rabaan inay joogaan hoteel wanaagsan iyo in ka badan kala bar (55%) waxay rabaan inay booqdaan meelaha dalxiiska ee maxalliga ah. Booqashada jimicsiga aad bay caan u tahay (24%), halka in ka badan saddex meelood meel (39%) ay rabaan inay aadaan habeenka marka ay u safrayaan meheradda. Falanqaynta warshadaha, waxaa la ogaaday in HR ay tahay xayawaanka xafladda ugu weyn, iyada oo 56% ay yiraahdaan habeen -bax waa mudnaan marka la booqanayo meel cusub oo ganacsi.
Ka dib muddo ka badan hal sano oo shaqo fog iyo isku dhafan, waxaa jiray dood badan oo ku saabsan in guriga ama xafiisku yahay kan ugu faa'iidada badan shaqaalaha. Badan US shaqaalaha leh safarka ganacsiga ayaa hadda ka sii badan sidii hore. Dhab ahaantii, 34% waxay sheegeen inay haystaan ​​fikradooda ganacsi ee ugu wanaagsan marka ay shaqada u safrayaan, taas oo muujinaysa sida dhiirri -gelinta u soo bixitaanka adduunka iyo la kulanka xiriirka shaqsi ahaan ay noqon karto.
In kasta oo ku habboonaanta in la awoodo in lagu boodo wicitaanka Zoom ee shirarka aan muhiimka ahayn waa la aqoonsan karaa, badiyaa fikradaha ugu wanaagsan, cilaaqaadka ugu wanaagsan-iyo natiijooyinka ugu wanaagsan-waxay dhacaan marka dadku safraan oo ay kulmaan fool-ka-fool.